‘फिनसेन फाइल्स’मा ‘कान्तिपुर’ले किन जोगायो बैँकहरुलाई? – MySansar
‘फिनसेन फाइल्स’मा ‘कान्तिपुर’ले किन जोगायो बैँकहरुलाई?
अमेरिकाको बजफिड न्युजले एक वर्षभन्दा अगाडि ठूलो संख्यामा गोप्य सरकारी कागजातहरुमा पहुँच पायो। खासमा सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचन र अन्य विषयहरुमा छानबिन गरिरहेका निकायहरुले जम्मा पारेको यो कागजातमा २१ सयभन्दा बढी शंकास्पद गतिविधिहरुको रिपोर्ट रहेछ। यस्ता गतिविधिहरुको रिपोर्ट बैँकहरु र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क जसलाई छोटकरीमा फिनसेन पनि भनिन्छ, लाई बुझाएको थियो। खासमा यो आफैमा अपराधको प्रमाण होइन, यो त अनुसन्धान र इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङका लागि सहयोग हो।
बजफिड आफैले ठूलो संख्याको यो कागजातलाई खोतल्न नसकेपछि उसले खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइसिआइजे र ८० देशका १०० भन्दा बढी सञ्चार संस्थाहरुसित सहकार्य गर्‍यो। आइसिआइजेमार्फत् नेपालको खोज पत्रकारिता केन्द्र (सिआइजे) पनि यसमा जोडियो। कृष्ण आचार्य, रामु सापकोटा र शिव गाउँलेले यसबारे रिपोर्ट तयार पारे, जुन विभिन्न अनलाइनहरुसहित कान्तिपुरमा समेत छापियो। तर सिआइजेको वेबसाइट, अरु अनलाइनहरुमा आएको समाचार र कान्तिपुरमा आएको समाचार फरक छ। कान्तिपुरले नेपाली बैँकहरु उल्लेख भएको जति अंश सम्पादन गरेर उडाइदिएको छ। यसले बैँक जोगाउने कान्तिपुरको बदनियत देखिएको छ।
3 thoughts on “‘फिनसेन फाइल्स’मा ‘कान्तिपुर’ले किन जोगायो बैँकहरुलाई?”
Pingback: सच्याएको कि झारा टारेको? कान्तिपुरले पत्रिकामा समाचार सच्यायो, अनलाइनमा जस्ताको तस्तै « Mysansar
बढे मिडियाको काम बढेबढे भ्रम छर्नु न हो । ब्यापारी, अपराधी, नेता, दूतावास जताबाट पाइन्छ वा लिन सकिन्छ घोप्टिएर, ढोगेर, थर्काएर, तर्साएर जसरी भए पनि कमाउनु जो छ । कहिलेकहीँ विदेशी रक्सीको बोतलको सोझो, कहिले नुनको सोझो गर्नु पर्छ । नाम पो त सत्य तथ्य काम त छर्लङ्गै छ नि ।
Pingback: पत्रकारले ‘सर्च’ गर्न नजान्दा ‘सेतीदेवी’लाई मर्का, ‘फिन्सेन फाइल्स’मा भएको गम्भीर गल्ती « Mysansar